नगरकोटीको गुनासोः दुखिया साहित्य र मार्क्सवादले पिर्‍यो  OnlineKhabar
सोमबार, ६ कार्तिक, २०७४
नगरकोटीको गुनासोः दुखिया साहित्य र मार्क्सवादले पिर्‍यो
कुमार नगरकोटी । तस्वीर: विकास कार्की
लेखक कुमार नगरकोटी लेखनको अलग शैली र हुलियाबाटै साहित्यको भिड र बजारमा प्रष्टै चिनिन्छन् । लेखनको सुरुवाती समयमा उनी घरभन्दा बढी घाट र नदीकिनारमा भेटिन्थे, पछिल्लो समय भिडमै रमाउन थालेका छन् । एकान्तमा रमाउने यी दुर्लभ मनुवा अहिले साहित्यिक मेलादेखि युट्युबका भिडियोहरुसम्ममा उपलब्ध भइरहेका हुन्छन् ।
बाहिरी दुनियाँमा घुलमिल हुन थालेयता उनले नेपाली साहित्यको परम्परा र प्रवृत्तिको नाडी पनि छामिरहेका छन् । साहित्यको समग्र अवस्था र लेखनमा आफ्नो मान्यताबारे उनी के भन्छन् त ? पढौं उनकै शब्दमाः
साहित्यमा मैनाली पथको ढर्रा
मैले १६ वर्षदेखि ३० वर्षको उमेरसम्म भयानक पढेँ । अचेल त सेलेक्टेड मात्र पढ्छु । सेलेक्ट हुँदाहुँदा यो यस्तै हो भन्ने लाग्छ । पहिलो वाक्यले नै धारणा बनाइदिन्छ, यो किताब पढ्ने कि नपढ्ने ।
आजकाल मलाई नेपाली साहित्य नै चित्त बुझिरहेको छैन । म नेपाली साहित्य त्यति पढिरहेको छैन । कहिलेकाहीँ एकदमै दुःख लाग्छ । अन्य देशको दाँजोमा त्यति लामो इतिहास नभए पनि नेपालको लिटरेचर हेर्दा फिक्सनको अवस्था देखेर चिन्ता लाग्छ ।
अहिलेसम्म हाम्रो साहित्य अहिलेसम्म पनि पुरानै प्याटर्नलाई मात्र बोकेर गुरुप्रसाद मैनालीकै पथमा हिँडिरहेको छ । फेरि मैनाली गलत हुन् भन्न खोजेको पनि होइन । तर, कहिलेसम्म हामी यसरी नै जाने ?
गुरुप्रसाद मैनालीदेखि अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दा, यो लाइनमा मदन पुरस्कार पाएको वा कुनै पनि पुरस्कृत र नन-पुरस्कृत किताब पढ्नुस्, यू डन्ट फाइन्ड एनि इनोभेटिभ थिङ्स । न्यारेसन त्यही छ । कथा त कति छ कति छ । तर, कथालाई प्रेजेन्ट गर्ने तरिकाहरु उही छन् । ह्वाट आर द टुल्स इन योर फिक्सन, इन योर राइटिङ ? लेखकको निजीपन छैन । जहाँ हेर्‍यो, पत्रिकाको स्टोरीहरुदेखि अरु कुरा, क्याप्टिभेट नै गर्दैन ।
नेपाली वुमेन राइटरहरुमा मैले रुचाउने खालको लेख्ने कोही पनि देख्दिनँ । अहिलेसम्म हाम्रो साहित्य अहिलेसम्म पनि पुरानै प्याटर्नलाई मात्र बोकेर गुरुप्रसाद मैनालीकै पथमा हिँडिरहेको छ । फेरि मैनाली गलत हुन् भन्न खोजेको पनि होइन । तर, कहिलेसम्म हामी यसरी नै जाने ?
लेखनमा मैले खासै नयाँ कुरा ल्याएको हैन । मैले भन्ने गरेको छु, मैले त्यो लेखेँ, जुन मैले पढ्न चाहँदा नेपाली साहित्यमा पाइनँ ।
५० वर्ष पुगेपछि लेखनबाट सन्यास !
म केही वर्ष अगाडिसम्म टिचिङ गर्थेँ, अब लेखनमै लाग्छु भनेर नोकरी छोडेँ । अहिलेसम्म राजीनामा पनि दिएको छैन । म यस्तै छु ।
अहिले अफिसियल्ली ४१ वर्ष पुगेँ । ५० वर्षसम्म चाहिँ आनन्दसँग लेख्छु । किनभने मलाई आनन्द लाग्छ । ह्वेर आई फाइन्ड माई आनन्द ? कहाँ भेट्छु त आनन्दभन्दा राइटिङमा आनन्द लाग्छ । म एक-एक वर्षमा किताब पनि निकाल्थेँ होला सायद । नलेख्न पनि सक्थेँ । कुनै त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट रुल्स छैन । आनन्दसँग डिफ्रेन्ट आइडियाहरुमा लेख्दै जाऊँ ।
मेरो कुनै योजना नै छैन । साहित्यमा आउने पनि मेरो कुनै योजना थिएन । यस्सै आइपुगिएको हो र यस्सै पनि जान्छु म । फिफ्टी इयर्ससम्म म लेख्छु भन्ने लागेको हो । यो ५० वर्षसम्म कति वटा किताब लेख्नु । वर्षमा एउटा लेखूँला । त्यही हो ।
बुढेसकालसम्म लेख्नुपर्छ भनेर बलजफ्ती तान्ने कुरा छैन । ५० वर्ष पुग्दासम्म मात्र लेखनमा सक्रिय रहन्छु र त्यसपछि म सायद लेख्दिनँ । सायदको कुरा छ अहिलेसम्म ।
मेरो फेमिलीमा कोही पनि नगरकोटी छैन । मेरो छोराको थर श्रेष्ठ नै लेख्देको छु । किनभने ऊ श्रेष्ठ नै हो । बुवाले जागिर खाने सिलसिलामा नगरकोटी लेख्नुभएको थियो, खासमा उहाँ श्रेष्ठ नै हो
आई डन्ट वान्ट टु ड्र्याग माइसेल्फ लाइक अदर राइटर्स । बुढेसकालसम्म म लेख्नै जन्मिएको हो, म लेख्दालेख्दै मर्छु भन्ने छैन । आई क्यान सिफ्ट टु अदर जनरा । म सिनेमै बनाउँछु होला । सर्ट मुभीहरु बनाउँछु होला । अरु नै केही गर्छु होला । सायद केही गर्दिनँ होला । आई एम जस्ट इन द जर्नी । एउटा यात्रामा छु ।
नगरकोटी के हो के हो !
एउटा जमातमा म नगरकोटी भनेर चिनिएको छु । किताबमा पूरै नाम नलेखी नगरकोटी मात्र लेख्न थालेको छु । नयाँ किताबमा त नगरकोटी पनि उडेको छ । बिस्तारै बिस्तारै म त्यो जर्नीतिर जाँदै छु ।
तर, म आफैं नगरकोटी पनि हैन । घरमा पनि म नगरकोटी हैन । अफिसियल्ली कुरा गर्दा मेरो फेमिलीमा कोही पनि नगरकोटी छैन । मेरो छोराको थर श्रेष्ठ नै लेख्देको छु । किनभने ऊ श्रेष्ठ नै हो । बुवाले जागिर खाने सिलसिलामा नगरकोटी लेख्नुभएको थियो, खासमा उहाँ श्रेष्ठ नै हो ।
मान्छेहरु मलाई सोध्छन्, नगरकोटी भनेको के हो ? नगरकोटी के हो के हो ! जुन नामलाई मैले लिइरहेँ, खासमा म त्यो होइन । के रै’छ त नगरकोटी भनेर हिस्ट्री पनि हेरेँ । पृथ्वीनारायण शाहको विरुद्धमा लड्न जयप्रकाश मल्लले गढवालदेखि ५ हजार लडाकुहरु ल्याएका थिए । तिनीहरु नै नगरकोटी थिए । मल्लले जितेको भए नगरकोटीहरुको राज हुन्थ्यो होला । तर, युद्ध त पृथ्वीनारायणले जिते, नगरकोटीहरु लाखापाखा छरिए । नगरकोटीहरु धनीमानी भएको औंलामा गन्न सकिन्छ होला ।
वाद र विचारभन्दा परको चरा
नेपालमा दुःखिया साहित्य किन धेरै छ र माक्सिर्ज्म यहाँ किन छ ? आज हेर्दा सबै कुरा त्यही एउटा बास्केटमा आउन सक्छ
पाठकको रुपमा म धेरै लेखकबाट चमत्कृत भएको छु । टाइम-टाइममा युगदेखि युगसम्म त्यस्ता धेरै लेखक छन् । मलाई वाद र विचारदेखि बाहिर रहेर लेखिएका कुरा मन पर्छ । मलाई सदा कस्तो लाग्ने भने बेयोन्ड जानुपर्छ । आई डु नट बेलोङ टु एनि रिलिजन, आई डु नट बेलोङ टु कास्ट, कन्ट्री । यो सबमा मलाई कुनै मतलब लाग्दैन । आई एम विदआउट कन्ट्री भन्ने फिलिङमा हराउन मन लाग्छ । तर, अफिसियल बेग्लै छ ।
मलाई माक्सिर्ज्म, अस्तिववाद लगायत सबै कुराबाट बेयोन्ड रहेर अल्वेज गो अहेड भन्ने लाग्छ, एकदम भित्रैदेखि । त्यसपछि मात्र यु मे रिच सोमह्वेर । मेरो जरा पनि छैन भन्ने लाग्छ । जरा छैन, म चरा हुँ सायद । अर्थात् विचार र वाददेखि पर ।
राइटरहरु विचारको अम्ब्रेलामुनि किन जान्छन् भने विचारले तपाईंलाई सेक्योर गरिदिन्छ । नेपालमा दुःखिया साहित्य किन धेरै छ र माक्सिर्ज्म यहाँ किन छ ? आज हेर्दा सबै कुरा त्यही एउटा बास्केटमा आउन सक्छ । माक्सिर्ज्मले तपाईंलाई सुरक्षा दिन्छ, हाम्रै क्याम्पको मान्छे हो यो भने घेरा बनाउँछ । मलाई केही भइहालेमा मलाई हेर्ने केही/कोही छ भन्ने सर्कल दिन्छ । त्यो बास्केटमा पसेपछि तपाईं स्वतन्त्र र अलग हुनु हुन्न । मलाई लाग्ने चाहिँ, बी इन्डिभिजुअल एन्ड ट्राई टु फाइन्ड योर वोन थिङ्स । यु ह्याट ट् बी अलोन ।
लेखकहरु ‘कम्फोर्ट जोन’ बाट कहिले निस्किने ?
मान्छे सामान्यतया आफ्नो परिचित स्पेसमा रहन्छ । मेरो भनाइ चाहिँ परिचित स्पेसबाट अपरिचित स्पेसमा जानुपर्छ । मेरै कलिग्स र कन्टेम्पोरेरी राइटरहरु हेर्दा यी सबै कम्फोर्ट जोनमा बसेर लेख्न चाहन्छन् । किनकि दे डन्ट टेक अ रिस्क । इफ यु डन्ट टेक अ रिस्क एन्ड यु आर ह्याप्पी विद योर कम्फोर्ट जोन, त्यसमा त के आनन्द आयो र ? तपाईं आफैंलाई पनि एकरसता लाग्छ ।
यु ह्याभ टु टेक रिस्क । कम्फोर्ट जोनबाट बाहिर निस्किनुपर्छ । कहिलेकाहीँ आफ्नै बाटोबाट पनि बाहिर निस्किनुपर्छ, त्यसपछि अनेक चिजहरु देख्न सकिन्छ ।
यु आर नट राइटिङ वन्ली स्टोरी, यु आर क्रियटिङ यो वोन इक्जिस्टेन्स अल्सो । पत्रिकाहरुमा यसो लेख्नकै लागि लेख्ने हो भने कम्फोर्ट जोनमा बस्नु ठीकै होला । म चाहिँ अपरचित-अपरिचिततिर गएर सोच्न र लेख्न चाहन्छु । कम्फोर्ट जोनबाट बाहिर निस्किएर गर्न सकियो भने हुने हो ।
उदाहरणको लागि, धेरै मान्छेले एकदमै नराम्रो किताब भने, तर त्यो किताब मलाई मन पर्‍यो । नयनराज पाण्डेको उपन्यास ‘घामकिरी’ । नयनराजले राइटिङमा सामाजिक यथार्थवादलाई बेस बनाउँदै आफ्नै शैली बनाएका छन् । तर, त्योभन्दा अलग रहेको घामकिरी पढ्दा मलाई आनन्द आयो । नयनराजको सुन्दर किताब नै त्यही लाग्छ । कुन अर्थमा भने, द्याट म्यान ह्याज डेस्ट्रोय हिज वोन बाउन्ड्री । उनले रिस्क लिँदै आफ्नो कम्फोर्ट जोनभन्दा बाहिर बसेर लेखे । त्यसैले यो फेल होला, सक्सेस नहोला, ब्लकबस्टर होला वा जिरो होला भन्ने सोचेर लेख्न थाल्यो भने त काम छैन । त्यस्तो कुरामा हू केयर्स !
२०७४ वैशाख ७ गते १०:४३ मा प्रकाशित
चीनबाट इन्टरनेट आउने भाका सरेको सर्‍यै
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ पोखरेलले दिए राजीनामा
सिट बाँडफाँटको तयारीमा संघीय फोरम र राजपा
जाजरकोटमा शक्ति बस्नेतलाई एमालेको भर, एमालेकै डर !
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पास, उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न प्रतिबन्ध
ठूला दलमा महिला उम्मेदवारको अनिकाल, १११ सिटमा जम्मा ९ महिला
३ प्रतिकृयाहरू प्राप्त
Pawan लेख्नुहुन्छ | २०७४ वैशाख ७ गते ११:४४
Kumar Nagarkoti an amazing writer. Inspired by his thoughts and writings!
Chiran Kandel लेख्नुहुन्छ | २०७४ वैशाख ९ गते ९:०५
Ghatmandu pachi Nagarkoti sir ko kun book aaudai chha? Kripaya janakari pau.
shine लेख्नुहुन्छ | २०७४ वैशाख ९ गते १४:२९
toit suddha nepali kaha bhetaune , hahha sabai english sabda lai nepali lipi ma lekhdai ma sabaile bujdaina onlinekhabar.com
पूर्वराजाको बेमौसमी रहरः नेतृत्व गरेको पनि देखियो !
ओभरसिजमा अजय र आमिर भन्दा विजय अगाडि
दीपक मनाङ्गे एमालेका ‘बागी उम्मेदवार’ !
कांग्रेसले सार्वजनिक गर्‍यो १०४ उम्मेदवारको अन्तिम सूची
अब बैंकमा भुक्तान गर्दा पासवर्ड होइन सेल्फी
कांग्रेसले छान्यो प्रदेशसभाका उम्मेदवारहरु (सूचीसहित)
हेर्नुहोस् प्रदेशसभाका ३३ सीटमा माओवादी उम्मेदवारको सूची
मुगुमा एमालेलाई भोट नहाल्ने माओवादीको निर्णय
गोरखामा बाबुराम र नारायणकाजीमध्ये को बलियो ?
जहाँ महिनामा एकपटक श्रीमतीलाई पिट्न पाइन्छ
जब रोबोटसँग युवतीको प्रेम बस्यो
आइफोनका लागि कुमारित्व लिलाम गर्ने किशोरीलाई यसरी सिकाइयो सबक
हजार किलोको फर्सी फलाएर किसानले राखे किर्तिमान